Kismaayo News » Reer Kismaayo oo balanqaaday walaalaynta Bulshada
Reer Kismaayo oo balanqaaday walaalaynta Bulshada
Kn: Wacyigalin diini ah oo culimada Soomaaliyeed ka wadaan masaajidda magaalada Kismaayo ayay shacabka Soomaaliyeed ee magaaladaasi ku dhaqan balan ku galeen walaalaynta umadda iyo in laf-ahaantoodu ay walaaloobaan.
Ayadoo inta badan culimada ugu caansan gayiga Soomaaliyeed ay nadwooyin wacyigalin ah ka wadaan Kismaayo ayaa himilada muxaadarooyinka oo ahayd walaalaynta iyo doorka ay ku leedahay Islaamka waxaa balanta ka qaaday shacabka Reer Kismaayo Sh. Axmed Cabdisamad.
Culimada ku sugan Kismaayo oo intooda badan goobjoog ahaa ayaa markii Sh. Axmed Cabdisamad baycada ka qaaday Reer Kismaayo ay labada gacmoodba kor u taageen taasi ooy ku muujinayeen diyaar ahaanshahooda iyo sida ay uga go’antahay inay walaaloobaan, umaddana u horseedaan walaalnimada.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa Kismaayo waxaa ka socday wacyigalin ay Culimo Soomaaliyeed ka wadeen magaalada taasi oo ku saabsanayd xumaanta qabyaaladda iyo tafaraaruqa bulshada iyo wanaagga walaalnimada iyo wadajirka bulshada.